१६ करोडको गाडी खरिदबारे संसदमा र्‍याखर्‍याखती – Himalaya TV
Home » समाचार » १६ करोडको गाडी खरिदबारे संसदमा र्‍याखर्‍याखती
२७ असार २०७४, मंगलवार ०८:२४
काठमाण्डौ, २७ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिका लागि १६ करोडको गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव नआएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका-संसद्मा विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत खर्च शीर्षकमा भएको छलफलका क्रममा यस विषयमा जवाफ माग भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसरी स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए ।
‘राष्ट्रपतिका लागि १६ करोडको गाडी खरिद गरिँदै छ भन्ने कुरा के हो ? ‘, सांसद सुवालले भने ,’राष्ट्रपतिलाई १६ करोड, प्रधानमन्त्रीलाई १५ करोड र मन्त्रीहरूलाई १४ करोडको गाडी खरिद गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रले कसरी धान्न सक्छ ? ‘
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो महँगो गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव नै नआएको बताए ।
यद्यपि, उनले राष्ट्रपतिको सुरक्षा हुने गरी राम्रो गाडी खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र सुरक्षामा ध्यान दिनु सरकार र जनताको कर्तव्य पनि रहेको बताए । याे खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।